अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट एकै दिन ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित थपिए – Khabar PatrikaNp
July 23, 2020 118
संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट एकै दिन ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका छन् । अमेरिकाको रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी) ले गएको २४ घण्टामा ६१ हजार २८८ जना संक्रमित थपिएको बताएको हो । त्यस्तै गएको २४ घण्टायता मात्र ४८८ जनाको यो संक्रमणका कारण ज्यान गएको अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ । यहाँ संक्रमितको संख्या अझै धेरै हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसबारे विश्वव्यापी तथ्यांक संकलन गरिरहेको जोन हप्किन्स विश्वविद्यायका अनुसार यसअघि यहाँ अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या ३८ लाख नाघेको छ । उक्त विश्वविद्यालयले यहाँ १ लाख ४० हजार ९२२ को ज्यान गइसकेको छ । गएको २४ घण्टामा मात्र यहाँ ४८८ जना संक्रमितको मृत्यु भएको बताइएको छ ।
संक्रमण तीव्र भएपछि केही राज्यले व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्ने योजनापछि सारेका जनाइएको थियो । तर पछि आएर धेरै राज्यमा व्यापार व्यवसाय पनि शुरु भएको छ । यसरी अमेरिका कोभिड १९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देशका रुपमा रहेको छ । सोमबार मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मास्क लगाउन सबैलाई अपिल गरेका छन् ।
Prevअमेरिकाले ह्युस्टनमा रहेको चिनियाँ महावाणिज्य दूतावास कार्यालय बन्द गर्न आदेश
Nextएकै दिन भारतमा ३७ हजारभन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमति थपिए
श्रीमानलाई खुसी राख्न यी १० काम गर्नुहोस्
कुलमान घिसिङको समर्थनमा मोरङको सुन्दरहरैंचाको विराटचोकमा युवाहरुले शान्तिपूर्ण प्रर्दशन
दुई दिन भित्र तपाईं’को काम बन्नेछ,बिल्कुलै बेवास्ता नगरि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला अबस्य पढेर
कोरोनाको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको औषधी नेपाल आउन थाल्यो, मुल्य यस्तो छ….. ..
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27876)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (22327)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (21005)